I-Excel yeMicrosoft iyincedo ekwenzeni izibalo ezisisiseko kwiinkcukacha. Ngamanye amaxesha kunceda ukwazi yonke imisebenzi ekhoyo ukuba isebenze nesihloko esithile. Apha siza kuqwalasela imisebenzi kwi-Excel edibene nokusabalaliswa komfundi. Ukongeza kokwenza izibalo ezihambelana nokusabalaliswa kwe-t, i-Excel inokubala ixesha lokuzithemba kwaye yenza iimvavanyo zeengcinga .
Imisebenzi ephathelele kwi-T-Distribution
Kukho imisebenzi emininzi kwi-Excel esebenza ngokuthe ngqo nge-distribution-t. Ukunikezelwa kwexabiso kunye nokuhanjiswa kwe-t, le mi sebenzi yonke ibuyisele inani le-distribution kulo msila ocacisiweyo.
Inxalenye yomsila nayo inokutolika njengokuba kunokwenzeka. Ezi prosile zomsila zingasetyenziselwa ixabiso le-p kwiimvavanyo ze-hypothesis.
Umsebenzi we-T.DIST ubuyisela umsila ongasekhohlo wokusabalalisa kwabafundi. Lo msebenzi ungasetyenziselwa ukufumana i- y- iqhosha kuyo nayiphi na ingongoma ejikelezayo.
Umsebenzi we-T.DIST.RT ubuyisela umsila ofanelekileyo wokusabalalisa kwabafundi.
Umsebenzi we-T.DIST.2T ubuyisela zombini imisila yokusabalalisa kwabafundi.
Le mi sebenzi inemibono efanayo. Ezi ngxabano zi:
Ixabiso x , elichaza apho i-axis x ifumaneka khona
Inani lee- degrees zenkululeko .
Umsebenzi we-T.DIST unengxabano yesithathu, esivumela ukuba sikhethe phakathi kokusabalalisa okubalulekileyo (ngokungena 1) okanye kungabi (ngokufaka i-0). Ukuba sifaka i-1, ke lo msebenzi uza kubuyisa inani le-p. Ukuba sifaka i-0 ke lo msebenzi uza kubuya y-i- curue ye-curve ye- x enikwe.
Yonke imisebenzi T.DIST, T.DIST.RT kunye ne-T.DIST.2T yabelana ngesakhiwo esifanayo. Siyabona indlela yonke le mi sebenzi iqala ngayo ngexabiso kunye nokuhanjiswa kwe-t kwaye ubuyisela imali. Kukho amaxesha apho sifuna ukuguqula le nkqubo. Siqala ngenani kwaye sinqwenela ukwazi ixabiso leli lihambelana nale nxalenye.
Kule meko sisebenzisa umsebenzi ochaphazelekayo kwi-Excel.
Umsebenzi we-T.INV ubuyisela i-inverse tailed inverse ye-T-distribution yabafundi.
Umsebenzi we-T.INV.2T ubuyisela i-tailed inverse ye-T-distribution ye-T.
Kukho iingxoxo ezibini kule misebenzi nganye. Iyokuqala inokwenzeka okanye inxalenye yokuhambisa. Okwesibini yimibolo yee-degrees zenkululeko yonikezelo oluthile esiyaziyo ngalo.
Siza kubona umzekelo we-T.INV kunye nemisebenzi ye-T.INV.2T. Masithi sisebenza kunye nokunikezelwa kwe-t nge-12 degrees yenkululeko. Ukuba sifuna ukwazi iphoyinti ekuhambiseni i-akhawunti eyi-10% yendawo phantsi kwekhava ukuya ngasekunene kweli nqaku, ngoko sifaka = T.INV (0.1,12) ibe yiseli engenanto. I-Excel ibuyisela ixabiso -1.356.
Ukuba esikhundleni sisebenzisa umsebenzi we-T.INV.2T, sibona ukuba ukungena = T.INV.2T (0.1,12) iya kubuyisa inani 1.782. Oku kuthetha ukuba i-10% yendawo phantsi kwegrafu yomsebenzi wokusabalalisa ungakwesobunxele we--1.782 ukuya ngasekunene ka-1.782.
Ngokubanzi, ngokulingana kwe-t-distribution, ngenxa yeP and degrees of freedom d sinayo T.INV.2T ( P , d ) = ABS (T.INV ( P / 2, d ), apho i-ABS umsebenzi wexabiso elipheleleyo kwi-Excel.
Enye yezihloko kwiimanani ezingabonakali zibandakanya ukuqikelelwa kweparameter yoluntu. Olu qi kelelo luthatha uhlobo lwexesha lokuzithemba. Umzekelo uqikelelo lwenani lentsholongwane lithetha isampuli. Uqikelelo lubuye lube nomda wephutha, apho i-Excel iya kubala. Kulo mida wephutha kufuneka sisebenzise i-CONFIDENCE.T umsebenzi.
Amaxwebhu e-Excel athi umsebenzi we-CONFIDENCE. Kuthiwa ukubuyisela ixesha lokuzithemba usebenzisa ukusabalalisa kwabafundi. Lo msebenzi ubuyisela umda wephutha. Iingxoxo zalo msebenzi zikwimeko, ekufuneka zifakwe kuzo:
I-Alpha - eli lizinga lokubaluleka . I-Alpha nayo i-1-C, apho i-C ibonisa inqanaba lokuzithemba. Umzekelo, ukuba sifuna u-95% wokuzithemba, ngoko kufuneka singene kwi-0.05 ye-alpha.
Ukuphambuka okusemgangathweni - oku kukuphambuka okuqhelekileyo kwiseti yethu yedatha.
Ifom esebenzisa i-Excel kule sibalo ngu:
Nanku M kungenxa yemida, i * ixabiso elibalulekileyo elihambelana nenqanaba lokuzithemba, s isampuli yokuphambuka okuqhelekileyo kwaye n isayizi yesampula.
Masithi sithi sinesampula esilulayo sekhekhi ezili-16 kwaye siyazilinganisela. Sifumana ukuba isisindo sawo si-3 grams kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kwe-0.25 amagremu. Yintoni i-90% yexesha lokuzithemba kwinqanaba lentlawulo yee-cookies kulo mqondiso?
Apha sichaza oku okulandelayo kwisitenki esingenanto:
= INKQUBO.T (0.1,0.25,16)
I-Excel ibuyisela 0.109565647. Lo ngumda wephutha. Sithatha kwaye songeza esi sampulu sithetha, kwaye ke ukuzithemba kwethu i-2.89 grams ku-3.11 gram.
I-Excel iya kwenza iimvavanyo ze-hypothesis ezihambelana nokuhanjiswa kwe-t. Umsebenzi T.TEST ubuyisela ixabiso le- p kwiimvavanyo eziliqela ezahlukeneyo. Iingxoxo zomsebenzi we-T.TEST zi:
I-Array 1, enika isethi yokuqala yesampuli idatha.
I-Array 2, enika isethi yesibini yedatha yesampuli
Imizila, apho singangena khona 1 okanye 2.
Uhlobo-1 lubonisa uvavanyo olubiniweyo, 2 uvavanyo lweesampula ezimbini kunye nohlobo olufanayo lwabantu, kunye novavanyo lweesampula ezimbini kunye nokuhlukahluka kwabantu.
Iindlela ezi-5 zokufumana ngcono kwi-Volleyball Ukubetha
'UJames kunye nokuPhiculwa kwePiet'
IMagical Pagan kunye neWiccan Symbols